တရုတ်နိုင်ငံသမ္မတ ရှီ နှင့် ရုရှားနိုင်ငံသမ္မတ ပူတင်တို့ တယ်လီဖုန်း ဆက်သွယ် ဆွေးနွေး - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံသမ္မတ ရှီ နှင့် ရုရှားနိုင်ငံသမ္မတ ပူတင်တို့ တယ်လီဖုန်း ဆက်သွယ် ဆွေးနွေး
တရုတ်နိုင်ငံ အရှေ့တောင်ပိုင်း ဖူကျန့်ပြည်နယ် Quanzhou မြို့မှ ရုရှားနိုင်ငံ မော်စကိုမြို့သို့ ဦးတည်ထွက်ခွာနေသည့် တရုတ်-ဥရောပ ကုန်တင်ရထားအား ဇန်နဝါရီ ၁၈ ရက်တွင် တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ပေကျင်း ၊ ဇွန် ၁၆ ရက် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံသမ္မတ ရှီကျင့်ဖိန်သည် ဇွန် ၁၅ ရက် မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ရုရှားနိုင်ငံသမ္မတ ဗလာတီမာပူတင်နှင့် တယ်လီဖုန်း ဆက်သွယ်ဆွေးနွေးမှု ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းဆက်သွယ်ပြောဆိုမှုအတွင်း ရှီက ယခုနှစ် အစပိုင်းမှစတင်ကာ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ မငြိမ်မသက်မှုများ နှင့် အသွင်ကူးပြောင်းမှုများ ရင်ဆိုင်ရာတွင် နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးသည် ကောင်းမွန်သောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအရှိန်အဟုန်ကို ထိန်းသိမ်းထားခဲ့ကြောင်း မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။
နှစ်နိုင်ငံအကြား စီးပွားရေး နှင့် ကုန်သွယ်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုသည် တည်ငြိမ်စွာတိုးတက်ခဲ့ကြောင်း ရှီကပြောကြားခဲ့သည်။ Heihe-Blagoveshchensk နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် အဝေးပြေးတံတားကိုသွားလာရေးအတွက် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး နှစ်နိုင်ငံအား ဆက်သွယ်ပေးသည့် လမ်းကြောင်းသစ်တစ်ရပ် ဖန်တီးပေးခဲ့ကြောင်း ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။
လက်တွေ့ကျသော နှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ တည်ငြိမ်ပြီး ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် တွန်းအားပေးရန် တရုတ်ဘက်က ရုရှားဘက်နှင့်အတူ လုပ်ဆောင်ရန် အဆင်သင့်ရှိကြောင်း ရှီက‌ ပြောကြားခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်မှု နှင့် လုံခြုံမှု တို့နှင့် ပတ်သက်၍ ၎င်းတို့၏ သက်ဆိုင်ရာအဓိက အကျိုးစီးပွားများ အပြင် ၎င်းတို့၏ အဓိက အလေးထားစရာများအပေါ်တွင် တစ်ဦးကို တစ်ဦး ဆက်လက်ပံ့ပိုးကူညီရေး ၊ ၎င်းတို့၏ ဗျူဟာမြောက်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုအား နက်ရှိုင်းစေရေး နှင့် ကုလသမဂ္ဂ ၊ BRICS ယန္တရား နှင့် ရှန်ဟိုင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့အစည်းကဲ့သို့ အရေးကြီးသော နိုင်ငံတကာ နှင့် ဒေသတွင်း အဖွဲ့အစည်းများတွင် ဆက်သွယ်ရေး နှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုများ အားကောင်းလာစေရေးတို့အတွက် ရုရှားနိုင်ငံ နှင့်အတူ လုပ်ဆောင်ရန် ဆန္ဒရှိကြောင်း ရှီက ပြောကြားခဲ့သည်။
ရုရှားနိုင်ငံသမ္မတ ပူတင်က သမ္မတရှီ၏ ခိုင်မာသောဦးဆောင်မှုအောက်တွင် ထူးခြားသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သည့် အောင်မြင်မှုများအပေါ် ရုရှားဘက်က တရုတ်နိုင်ငံအား စိတ်ရင်းမှန်ဖြင့် ချီးကျူးဂုဏ်ပြုကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
နှစ်အစကတည်းက ရုရှားနိုင်ငံ နှင့် တရုတ်နိုင်ငံတို့အကြား လက်တွေ့ကျသောပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများသည် တစ်ဖြည်းဖြည်းပို၍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာခဲ့ကြောင်း ပူတင်က ပြောကြားခဲ့သည်။ ရုရှားနိုင်ငံအနေဖြင့် တရုတ်ဘက်က အဆိုပြုခဲ့သည့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလုံခြုံရေး အဆိုပြုချက်ကို အားပေးထောက်ခံပြီး အကြောင်းပြချက်တစ်ချက်တစ်နေဖြင့် ရှင်းကျန်း ၊ ဟောင်ကောင် နှင့် ထိုင်ဝမ် နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ကိစ္စရပ်များအား အသုံးပြုကာ တရုတ်နိုင်ငံ၏ ပြည်တွင်းရေးကို ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ရန် မည်သည့်အင်အားသုံးမှုမျိုးမဆို ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်ကြောင်း ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။
ရုရှားနိုင်ငံအနေဖြင့် ကမ္ဘာကြီး၏ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံစုံပူပေါင်းပါဝင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်အား မြှင့်တင်ရာတွင် အပြုသဘောဆောင်သော ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများ ပြုလုပ်ရန် နှင့် ပိုမိုတရားမျှတပြီး ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သော နိုင်ငံတကာဖွဲ့စည်းပုံစနစ်အား ထူထောင်ရေးအတွက် တရုတ်နိုင်ငံနှင့်အတူ ဘက်ပေါင်းစုံပါဝင်သောညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှု အားကောင်းလာစေရေး အဆင့်သင့်ရှိကြောင်း ပူတင်က မှတ်ချက်ပြုခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
နိုင်ငံခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးသည် ယူကရိန်းအရေးနှင့် ပတ်သက်၍လည်း အမြင်ချင်း ဖလှယ်ခဲ့သည်။ တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် အဆိုပါကိစ္စ၏ သမိုင်းနောက်ခံ အခြေအနေ နှင့် အဆိုးအကောင်း အခြေခံအပေါ်တွင် အခြေအနေအား အမြဲတမ်း လွတ်လပ်စွာ အကဲဖြတ်ပြီး ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေး နှင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးပွားရေးအစီအစဉ် တည်ငြိမ်ရေးကို တက်ကြွစွာ မြင့်တင်ခဲ့ကြောင်း အလေးပေးပြောကြားခဲ့သည်။
သက်ဆိုင်သူများအားလုံးက တာဝန်သိစိတ်ဖြင့် ယူကရိန်းအကြပ်အတည်း မှန်ကန်သည့် ပြေငြိမ်းခြင်းအတွက် တွန်းအားပေးသင့်ကြောင်း ရှီက ပြောကြားခဲ့သည်။ ယင်းရည်ရွက်ချက်အတွက် တရုတ်နိုင်ငံသည် သင့်လျော်သည့်အခန်းကဏ္ဍမှ ဆက်လက်ပါဝင်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။ (Xinhua)
Source: Xinhua Editor: huaxia 2022-06-15 21:54:17
During their conversation, Chinese President Xi Jinping noted that since the beginning of this year, bilateral relations have maintainedasound development momentum in the face of global turbulence and transformations.
BEIJING, June 15 (Xinhua) — Chinese President Xi Jinping on Wednesday afternoon heldaphone conversation with his Russian counterpart, Vladimir Putin.
During their conversation, Xi noted that since the beginning of this year, bilateral relations have maintainedasound development momentum in the face of global turbulence and transformations.
The economic and trade cooperation between the two countries has made steady progress, Xi said, adding that the Heihe-Blagoveshchensk cross-border highway bridge has opened to traffic, creatinganew channel connecting the two countries.
The Chinese side stands ready to work with the Russian side to push for steady and long-term development of practical bilateral cooperation, Xi said.
China is willing to work with Russia to continue supporting each other on their respective core interests concerning sovereignty and security, as well as on their major concerns, deepening their strategic coordination, and strengthening communication and coordination in such important international and regional organizations as the United Nations, the BRICS mechanism and the Shanghai Cooperation Organization, Xi said.
China is also willing to work with Russia to promote solidarity and cooperation among emerging market countries and developing nations, and push for the development of the international order and global governance towardsamore just and reasonable direction, he added.
For his part, Putin said the Russian side sincerely congratulates China on its remarkable development achievements under the strong leadership of Xi.
Since the start of the year, the practical cooperation between Russia and China has been developing steadily, he said, adding that Russia supports the Global Security Initiative proposed by the Chinese side, and opposes any force to interfere with China’s internal affairs using so-called issues regarding Xinjiang, Hong Kong and Taiwan, among others, as an excuse.
He noted that Russia is ready to strengthen multilateral coordination with China so as to make constructive efforts in boosting multipolarization of the world, and establishingamore just and reasonable international order.
The two heads of state also exchanged views on the Ukraine issue. Xi emphasized that China has always independently assessed the situation on the basis of the historical context and the merits of the issue, and actively promoted world peace and the stability of the global economic order.
All parties should push foraproper settlement of the Ukraine crisis inaresponsible manner, Xi said, adding that China for this purpose will continue to play its due role. ■
Photo – A China-Europe freight train heading for Moscow leaves Quanzhou, southeast China’s Fujian Province, Jan. 18, 2022. (Xinhua/Wei Peiquan)
ဟိုင်နန်လေကြောင်းလိုင်းက ချုံချင့်-ရောမ ဝန်ဆောင်မှု ပြန်လည်စတင်မည်
ရုရှားက ဥရောပသို့ ဓာတ်ငွေ့ပေးပို့မှု လျှော့ချ